पूजा शर्माको आक्रोश : पत्रकारले यति अशिष्ट शब्द बोल्न मिल्छ ? – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/पूजा शर्माको आक्रोश : पत्रकारले यति अशिष्ट शब्द बोल्न मिल्छ ?
२०७७ साउन २४ गते ९:०८ मा प्रकाशित
चलचित्र पत्रकार प्रकाश सुवेदीले आफ्नो एक टेलिभिजन कार्यक्रममा पूजामाथि लक्षित गर्दै छुद्र टिप्पणी गरेका थिए । त्यसको भिडियो क्लिप टिकटकमा भाइरल बनेको छ । धेरैले पत्रकार सुवेदीको कटु आलोचना गरिरहेका छन् ।
पूजाको कमजोर सामान्य ज्ञानलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा निकै ट्रोलहरु बनेका थिए । यसमा पूजाले आफ्नो कमजोरी स्वीकार्दै माफीसमेत मागिसकेकी छन् । आफूले अन्तरवार्ताको सो अंश सम्पादन गर्न आग्रह गर्दा सुवेदीले नमानेको पूजाको भनाइ छ । उनले लेखेकी छन्, ‘अन्तरवार्तामा बोलाइयो, गएँ । सामान्य ज्ञानसँग सम्वन्धित प्रश्न सोधियो । इन्टरभ्यू चल्दाचल्दै मैले उहाँलाई मैले राम्रो गर्न सकिनँ, प्लिज यो काटिदिनुस् भनेँ । तर, मान्नुभएन ।’